I-china PDQ embondelene Isigamu Pallet Isibonisi seWalmart Stores abakhiqizi nabaphakeli | URaymin
Inombolo imodeli: GFPD20200705
Usayizi: W48 `` x D20 '' x H48 ''
impahla Umtshingo oqinile B + 350gsm CCNB
Ukuphrinta: Ukuphrinta kwe-CMYK
Isiphetho sokugcina: I-Glossy Varnish
Indawo Yomsuka: CN
I gama le-brand: Isibonisi seRaymin
Isitifiketi: SGS, ISO, BSCI
Ubuncane be-oda Ubuningi: 100pcs
Intengo: Hlola nathi
Okufakiwe Yekuchumana: Umhlangano ogcwele imikhiqizo ku-
Isikhathi sokuthumela: Izinsuku eziyi-15 zama- ,0005,000pcs
Isikhathi sokuhola sesampula Izinsuku ezi-3
Ukukhokhiswa kwesampula I-150 $, ebuyiselwa imali ngemuva kokuqinisekiswa kwe-mass
Inkokhelo Imigomo: L / C.
Amandla Wokunikezela: Ama-100,000 ama-PC ngesonto
Ukwakhiwa kwesakhiwo Idizayini yokubonisa iHallet Pallet
Umsebenzi wobuciko / umdwebo Kwenziwe ngentando
Ifomethi yobuciko I-PDF, i-AI, i-PSD, i-PS
Enye indlela yokuheha ukunakwa kwamakhasimende ukuphrinta kwekhwalithi kwizibonisi zakho. Lokhu kungenziwa ngokukhombisa ilogo yenkampani yakho, ngokukhombisa uphawu lwakho noma ngokugqamisa umkhiqizo ngendlela ebukekayo. Noma ngabe ukhetha ukuboniswa phansi, izimpawu zokulenga noma isiphathi sencwajana, ukubonisa amakhadibhodi okwenziwe ngokwezifiso kungaholela ekuthengisweni okuphezulu. Ukuboniswa kwePoint of Purchase (POP) kwaziwa ngokunikela ngenzuzo ephezulu ekutshalweni kwemali. Ukubeka izibonisi ezakhiwe kahle nezimibalabala zomkhiqizo ezitolo zakho nasekuphumeni kusiza ukudonsela amehlo wamakhasimende akho kwimikhiqizo yakho efakiwe. Sinikeza izinhlobo eziningi zokuphrinta ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende ethu. Ngamakhono wethu wokuphrinta ahlukahlukene, ungakhetha ukuthi yisiphi isitayela esizolingana kangcono nezidingo zakho zokubonisa kanye nesabelomali. Akunandaba ukuthi ukhetha siphi isitayela, ungalindela okuhle kakhulu ngemishini yethu esezingeni eliphakeme kanye nochwepheshe bokulawulwa kombala abaqinisekisiwe esizeni.
Amakhono ethu afaka:
1) Ukuphrinta kwe-Glue: Ukufeza ukuphrinta kwekhwalithi yezithombe, sizophrinta ihluzo zakho zokucaca okuphezulu ephepheni, bese lifakwa ebhodini likathayela. Le nqubo isetshenziselwa ukuhlangabezana nezidingo zakho zokuphrinta ezisezingeni eliphakeme.
2) I-Flexography: Lesi sitayela esivumelana nesabelomali sihilela ukuphrinta uphawu lwakho noma ubuciko ngqo ebhodini likathayela. Lokhu kuvame ukufaka phakathi kombala owodwa noma emithathu. Lesi sitayela esivumelana nesabelomali sihilela ukuphrinta uphawu lwakho noma ubuciko ngqo ebhodini likathayela. Lokhu kuvame ukufaka phakathi kombala owodwa noma emithathu.
3) Idijithali: Ngale nqubo, sisebenzisa ukuphrinta okugcwele-umbala ngqo ebhodini likathayela ukuthola isixazululo esingabizi. Lokhu kuhle kumasampula wesizini noma wesikhashana. Uma udinga usizo lokunquma ukuthi imaphi amakhadibhodi aprintiwe azosebenza kangcono kuphrojekthi yakho, sicela usishayele. Sizojabula ukuxoxa ngezinketho zakho futhi sinikeze iseluleko sochwepheshe.
I-4) Ukuboniswa kweRaymin kuqhuba konke ukuklama nokuphrinta kwethu ngaphakathi. Silawula ngokuphelele ikhwalithi nesivinini sephrojekthi ngayinye ukuze uhlale wazi kahle ukuthi uzolithola nini i-oda lakho. Nge-set-plate setter yethu esesizeni, sinikeza ubufakazi bombala ngaphakathi kwamahora angama-36. Sinamaphesenti angaphezu kwama-99% ngesikhathi esifanele ngenxa yokusebenza kwethu ngaphakathi endlini. IRaymin Display inikeza izinzuzo eziningi ezisihlukanisa nomncintiswano.
Njengenkampani eqinisekisiwe ye-ISO 9001 / FSC / BSCI, imikhiqizo yethu ibanjelwa emazingeni emikhakha ephakeme kakhulu. Zonke izinyathelo zenqubo yethu yokuklama, yokukhiqiza neyokuphrinta ibhekana nokulawulwa kwekhwalithi eqinile ukuqinisekisa ukuthi umphumela wokugcina uzokweqa okulindelwe. Ngaphezu kwalokho, siyaziqhenya ngendlela yethu eluhlaza, sisebenzisa izinto ezakhiwe kusuka kokuphindiwe okungu-100%. Izitulo zokubonisa amakhadibhodi eziphrintiwe zinikela ngamandla angenamkhawulo wokukhuthaza ukuzibandakanya kwamakhasimende. Ngemibala egqamile, yekhwalithi, ukubonisa kwakho kungakhuphula ibhizinisi lakho futhi kukhulise ukuqwashisa ngomkhiqizo. Banikela futhi ngesibonisi esidonsa amehlo nesisebenzisanayo ukukhulisa ukuzibandakanya kwesitolo. Oda Ekhombisa Ngokwezifiso Amakhadibhodi Wakho Namuhla. Imaketha imikhiqizo yakho ngesitendi sokubonisa esiphrintiwe esivela ku-Creative Displays Now. Ngezitayela ezahlukahlukene nezinketho zokuphrinta, sinokulingana okulungile kwanoma yiliphi ibhizinisi. Qalisa ngokucela isilinganiso namuhla! Unemibuzo embalwa mayelana nemikhiqizo yethu? Zizwe ukhululekile ukuxhumana nathi.
Langaphambilini Imigqomo yesipho sokugoqa izipho yokugoqa inhlanganisela yemikhiqizo yePhathi
Olandelayo: Ibhokisi lokupakisha le-Smart 3 tier PDQ lamaketanga ayisihluthulelo, isibonisi esiphikisayo sokuthengisa okushisayo
Flat phama Costco Okugcwele Pallet Khombisa for Frui ...